Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa Qalad Ku Tilmaamay in la Diido Bannaabax iyo Shirar – Goobjoog News
Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa Qalad Ku Tilmaamay in la Diido Bannaabax iyo Shirar
Wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa qalad ku tilmaamay in la diido bannaabax iyo shirar, hadalka wasiirka, waxaa uu ka hor imaanayaa war uu saxaafadda u sheegay saacado ka hor wasiirka amniga Maxamed Abukar Islow Ducaale.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsaneynaa iney la shaqeeyaan hay’adaha amniga, sidoo kale shacabka waxaan ka codsaneynaa in mar walbo hay’adaha amniga u dhego nuglaadaan ayna ku dhaqaaqaan awaamiirta ay soo gudbiyeen xeer ilaaliyaha ama shuruuicda, sidoo kale waxaan rabnaa in halkaan ka cadeynno in goobaha mar kasta lagu shiro in iyadoo fasax haysan aan la sameyn karin, waxaan rabnaa in mar walbo oo la shirayo in fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir, shacabka Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa iney kaalin ka qaataan amniga, nabadeynta, kana fogaadaan fal kasto oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni, muwaadin walba waxaa waajib ku ah in danta guud uu kahormariyo danta gaarka ah” ayuu yiri wasiir Maxamed Abukar Islow Ducaale.
Hadaba, wasiirka wasiirka arrimaha dastuurka Soomaaliya Avv. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxaa uu soo qaatay in diidmada bannaabaxyada iyo Shirarka ay ka hor imaaneyso qodobo dastuuri ah sida qodobka 16aad iyo 20aad.
Akhriso, Labada qodob uu Wasiirka Dastuurka ka hadlay:
Abdullahi Khalif kulmiye
1;Waxaa wanaagsan in Sharciga laga danbeeyo.oo uusan dhaqaqmin sidii uudono.2′ qofku maraaci karo qof. Ama koox sharciga wadanka ka soo horjeeda sida kaaxda alshaab ookale ama midlamid ah oo wadanka iyo xeerkaba meel uga dhaceeysa.3′ waasiradu waa in eey hoos uwadahadlaan haddii mid erey qalada uu ku dhwaaqo in midkakle uu banaanka soo dhigo ma ahan sidii majaajilada riwaayadaha in laga dhigo siyaasada mahan.
Wasiir xoosha si fiican ayuu u hadlay qof waliba waxaa uu xaq u leeyahay I’m uu banaab bax sameyn karo xisbina Ku biiri karo iyadoon LA qasbi